ဖြစ်စဉ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Poetry » ဖြစ်စဉ်	14
Posted by Thint Aye Yeik on Aug 16, 2015 in Poetry | 14 comments
အလင်းဆက် ပြောချင်တဲ့ စကား
ကိုယ့်ရဲ့ ဘယ်ဘက်မျက်လုံးက ကိုယ့်ရဲ့ညာဘက်မျက်လုံးကို လှမ်းကြည့်တာတောင်…
သြဂုတ် ၁၆၊၊ ၂၀၁၅၊၊
၀င့်ပြုံးမြင့် says: . မိုက်တယ်
Alinsett @ Maung Thura says: အဟိ မလိမ်မာဘူးးးး
naywoon ni says: အိမ်းးးး ငါလဲ အဲ့သလို လှမ်းမမြင်​ရဘူး ။ ပိုဆိုးတာက ငါ့နားရွက်​​တွေကို မှန်​မပါပဲ ပြန်​ကြည့်​လို့မရဘူး ။ ဆိုးလိုက်​တဲ့ ဘွ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12181
Alinsett @ Maung Thura says: ဆံပင်ညှပ်တဲ့အခါ အဲ့နားရွက်တွေကို ထည့်ညှပ်ခိုင်းလိုက်ရင်ကောာာ
ဦးကြောင်ကြီး says: .. ဖြစ်စဉ် မျှစ်ချဉ် သစ်ထွင် ရှဉ့်ဝင်
ဇီဇီခင်ဇော် says: နာ့ လိုအင်တွေက …
နာ့ ရဲ့ ရောင့်ရဲမှုတွေကို ထားခဲ့ပြီ။
HMM says: မမြင်ရတာတော်သေးတယ် မြင်ရရင်နိကြိုက်မဲ့လူရှိမှာမှုတ်ဘူး… :P
အောင် မိုးသူ says: လူတိုင်းက လိုအပ်ချက်တွေချည်းပါပဲ သူငယ်ချင်းရယ်။ တော်တော်များများက အဆင်မပြေကြဖူးရယ် အဲသည်ကြားထဲက ကိုယ့်ကိုယ်ကို စိတ်ချမ်းသာအောင် နေနေရတယ်။ ကိုယ်ချင်းစားတယ်။ -_-
kai says: ဟုတ်ပါ့..
ညာနှခေါင်းပေါက်က.. ဘယ်နဲ့တူတူ ရှုနေခဲ့..။
ဟောဟို နှုတ်ခမ်းကို ဒီသွားငုံကိုက်တဲ့အခါ….
၂စိတ်က ၁ကိုယ်ဖြစ်တတ်သတဲ့..။ ။
လုံမလေးမွန်မွန် says: သဂျီး မလိမ်မာဘူး
aye.kk says: ဖြစ်စဉ်အရ…..
black chaw says: Negative Thinking ကို ပြောချင်တာ ထင်ပါရဲ့…။
Alinsett @ Maung Thura says: ဖတ်သွားတဲ့ အတွက် ဇူးဇူးပါဗျားးး
မစုဥာဏ် says: ရိုးရှင်းတဲ့ လောက နိယာမ တစ်ခု အကြောင်း … ဖတ်ပြီး အတွေးပွားသွားပါတယ်